GND: ihe niile ị chọrọ ịma banyere ndị acronyms | Ngwaike efu
Isaac | 19/11/2021 08:38 | Emelitere ka 22/11/2021 11:36 | General
GND, ala, ala... Gịnị kpọmkwem ka okwu ndị ahụ na-ezo aka? Ha bụ otu okwu ka ọ bụ enwere ndịiche? All ndị a obi abụọ na-ugboro mgbe ị na-eche ụwa nke electronics maka oge mbụ na ị ga-eji components, ma ha nwere azịza dị mfe. N'isiokwu a, ị ga-enwe ike ịghọta nke ọma ihe ha pụtara, ihe ha bụ maka na sekit, mkpa ha, na ma ma ọ bụ na e nwere ọdịiche dị n'etiti okwu. Kedu ihe kpatara eji jikọọ ọnụ ọnụ na njikọ a na a arduino osisi, Wdg
1 Ala = ala = GND?
1.1 Kedu ihe bụ GND ma ọ bụ ala na sekit eletrọnịkị?
1.2 Gịnị bụ uka na ngwa?
2 Ụdị ala ma ọ bụ GND
3 Kedu maka akụrụngwa eletrọnịkị?
Ala = ala = GND?
Ọbụghị naanị na enwere ọtụtụ okwu iji na-ezo aka n'otu ihe, mana ị ga-ahụkwa ọtụtụ ụdị akara ndị ha nhata. Nke ukwuu GND, dị ka ala, ọdụ na-anọpụ iche, dị ka ala, ha nwere ike na-ezo aka n'ihe dịtụ iche, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eji ha eme ihe n'otu aka ahụ:
Kedu ihe bụ GND ma ọ bụ ala na sekit eletrọnịkị?
GND dị mkpụmkpụ maka Ground, na eletrọnịkị na sekit eletriki, na-ezo aka na ụzọ nlọghachi azụ nke ugbu a na isi iyi eletrik, ma si otú a kwe ka sekit ahụ mezue. Ị nwere ike ịchọta ya ma na usoro ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe, ya na oge ya, na-anọpụ iche na ala, yana na sekit ndị dị ugbu a, ebe ndị dị mma, ndị na-adịghị mma na ala dị n'ala.
Enwere ike ile ya anya dị ka ebe ntụaka na sekit iji tụọ voltaji, ebe ọ bụ ihe na-adịghị ike, na ọbụna a. njikọ anụ ahụ kpọmkwem na ala. Tụkwasị na nke a, ọ nwere ike ịbụ usoro nchekwa, nke mere na ọ bụrụ na ụdị ụfọdụ nke ntanye nke ugbu a na-apụta na sekit, ma ọ bụ nkwụsị nke ikuku ikuku (ọkụ ọkụ), ike na-emebi emebi nwere ike ịbanye n'ụwa ma tụgharịa ya ka ọ ghara imebi. akụrụngwa.
Gịnị bụ uka na ngwa?
Ị ga-akpachara anya, ebe ọ bụ ezie na a na-ewerekarị ya dị ka otu okwu. uka na ngwa eletriki ọ na-abụkarị ihe dị iche na nke ekwuru n'elu. Ma ọ bụ na n'ọtụtụ ngwaọrụ nwere ụlọ ma ọ bụ ihe owuwu ígwè, a na-ejikọta eriri USB na nhazi ahụ, n'ikpeazụ jikọọ ya na njikọ ụwa.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ a obere impedance ụzọ nke mere na mgbe enwere nsogbu mkpuchi, ihe dị ugbu a na-agafe n'ụzọ a ma mee ka nchebe dị mkpa (fuses, thermals, ...), si otú a na-ezere imebi ngwaọrụ ma ọ bụ na ngwaọrụ ndị ahụ nwere ike ịgbanye ndị ọrụ eletrik mgbe ha metụrụ ha aka.
Ụdị ala ma ọ bụ GND
E nwere ọtụtụ ụdị GND ma ọ bụ njikọ ala mgbe ị na-ekwu maka sekit eletrik:
Ala anụ ahụ: ọ na-ezo aka n'ikike nke elu ụwa, ebe mkpanaka ọla kọpa nke ejikọrọ waya ụwa na-ebuga voltaji ndị ahụ na-emerụ ahụ n'ebe ahụ. Echiche nke metụtara nchekwa nke ndị mmadụ, n'ihi na ndị ọrụ na-enwe ike dị ka ụwa mgbe ị na-arịgo n'ala. Ọ bụrụ na ngwaọrụ ndị ahụ dị n'otu ikike ahụ, a gaghị enwe mgbanwe ọ bụla, ya bụ, a gaghị enwe ọkụ eletrik.
Analog ala: Ọ bụ nkọwa zuru oke nke ụwa, na English Ground na ebe mbiri nke GND si abịa. N'okwu a, ọ bụ ihe ntinye aka na sekit eletrọnịkị na 0 volts.
Ọfọn, eleghị anya ị ka nọ ihe mgbagwoju anya… Ma ọ dị nnọọ mfe. Buru n'uche na na sekit eletriki, ma GND ma ọ bụ ala oge ochie, yana ala (chassis ma ọ bụ casing), ga-ejikọta ya na ala. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ebe ala na ala enweghị otu voltaji na sekit, na ọbụna waveform nwere ike ịdị iche iche, dị ka Buck converters.
Kedu maka akụrụngwa eletrọnịkị?
Dịka ị siri hụla, ọtụtụ akụrụngwa eletrọnịkị nwere otu ma ọ bụ karịa akara akara dị ka GND. A ghaghị ijikọ ọnụ ọnụ ndị a na ụwa na sekit nke a ga-etinye ha, ma ọ bụghị ya, ha agaghị arụ ọrụ ma ọ bụ ọbụna mebie. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa ka ịgụ akwụkwọ data onye nrụpụta ka ị mara pinout na ime njikọ ziri ezi. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere ihe mmetụta ihe oyiyi a, n'ụkpụrụ, ntụtụ na-arụpụta maka ọrụ ahụ ga-abụ DQ na Vdd, ya bụ, nke ga-enye data nke ihe mmetụta na-agụ na ihe mmetụta. Agbanyeghị, ị ga-ejikọrịrị GND, ma ọ bụghị ya, ọ gaghị arụ ọrụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » GND: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mkpọghe okwu ndị a